Iwo Matatu Gorges Dhamu, rakakura kwazvo pasirese! | Green Renewables
Iyo matatu Gorges Dam, rakakura kwazvo pasirese
Tomàs Bigardà | | simba re hydraulic, Simba reHygroelectric, Renewable simba
Iyo matatu Gorges Dam (chakareruka Chinese: 三峡 大坝, yechinyakare Chinese: 三峽 大壩, pinyin: Sānxiá Dàbà) iri mukati merwizi Yangtze muChina. Ndicho chirimwa chikuru chemagetsi munyika.
Kuvakwa kwedhamhu kwakatanga muna 1983 uye kwaifungidzirwa kutora makore angangoita makumi maviri. Musi waNovember 20, 9 kosi yerwizi yakavhurwa uye muna 2001 boka rekutanga remagetsi rakatanga kushanda. Kutanga muna 2004, mazana maviri emazana emagetsi emagetsi akaiswa pagore, kudzamara basa rapera.
1 Iwo Matatu Gorges Dhamu,
1.2 Rwizi rweYangtze
2 Kuchinja Kwazvino MuGoridhe Nhatu
2.1 Huro kusuma
Iwo Matatu Gorges Dhamu,
Musi waChikumi 6, 2006, rusvingo rwekupedzisira rwedziva rwakabviswa, paine zvakaputika zvakakwana kuputsa zvivakwa zvine mazana mana gumi zvine nhurikidzwa. Yakapedzwa muna Gumiguru 400, 10. Vanenge mamirioni maviri vanhu vaive kutama kunyanya munharaunda nyowani dzakavakwa muChongqing guta.
Dhamu iri rakamira pamahombekombe eguta reYichang, mudunhu reHubei. Dhamu racho rakatumidzwa zita rekuti Gorotkia, uye rinogona kuchengeta 39.300 bhiriyoni m3. Zvine 32 turbines e700 MW imwe neimwe, 14 yakaiswa padivi rekuchamhembe kwedhamhu, gumi nemaviri kudivi rekumaodzanyemba kwedhamhu uye mamwe matanhatu epasi pevhu, inosvika simba re12 MW.
Muzvirongwa zvekutanga, iri dhamu rimwe chete raizove nekwanisi yekupa 10% yezvemagetsi eChina. Zvisinei kukura kuri kudiwa yave ichidudzira, uye yaizongokwanisa chete kupa simba kune 3% yeChina yekushandisa mumba.
Iri basa rakakura rakasiya maguta 19 nemadhorobha mazana matatu nemakumi maviri nemaviri pazasi pemvura, zvichikanganisa vanhu vangangosvika mamirioni maviri nekunyudza 322 km2 yenzvimbo yeChinese
Iri dhamu rinogadzirisa kuwedzera kwekuyerera kwerwizi urwu, kunokonzerwa nemwaka wemvura, nekudaro richidzivirira mafashama e maguta akavakidzana. Iwo huwandu hwemvura hunosiyana kubva pamamirimita makumi mashanu nemakumi masere nemashanu, zvichienderana nemwaka. Chimwe chinangwa chekuvakwa kwayo ndechekupa mvura kune chikamu chikuru chevanhu vechiChinese, nekwanisi yekuchengetedza mamirioni emamirioni makumi matatu nemazana matatu nemazana matatu, emamiriyoni makumi maviri nemaviri nemakumi mashanu achapihwa kudzora mafashama.
Chimwe chinangwa ndechekugadzira magetsi, ayo aachave nawo 26 emagetsi turbine ye700.000 kilowatts imwe neimwe.
Nekuvakwa kwedama guru iri, iyo rwizi kufamba paRwizi rweYangtze, iyo ichawedzera kukura kweupfumi hwenyika. Asi sechikamu chebudiriro uye kufambira mberi, nharaunda iyo ichave iri matatu Gorges Dhamu yakave neshanduko huru.
Iyi purojekiti yakafashamira kupfuura 250 km2 yenyika, maguta gumi nematatu uye mazana emisha midiki pamahombekombe erwizi. Kubviswa panzvimbo nekuda kwebudiriro kwakamanikidza vanhu vanodarika chiuru nemazana mazana matatu nemakumi masere kuti vasiye dzimba dzavo, chinova ndicho chinhu chikuru kudzinga munhoroondo, nekuda kwekuvakwa kwedhamu.
Kungopa muenzaniso, mugore ra2001 Spain yakaburitsa magetsi emagetsi emvura anosvika 18.060 MW. Iyo matatu Gorges Dam inokwanisa kugadzira simba regore pamusoro pe17.680 MW.
Iyo Nhatu Gorges Yangtze Rwizi ndiyo yakanakisa chikamu cheYangtze Rwizi. Ivo vanoumba akateedzana e zvakasikwa uye zvetsika zvinokwezva.
Kuchinja Kwazvino MuGoridhe Nhatu
Iyi chikamu chenyika yaimbova nzvimbo ine ngozi. Kunyangwe, kubvira kuvakwa kweTatu Gorges Dhamu (rakagadzirwa zvakakwana muna 2006) iro rwizi rwakawedzera kusvika 180 m (590 ft) uye rwizi rwave rwakawanda kudzikama uye kufambiswa nyore. Mazuva ese ngarava zhinji dzezvikepe dzinofamba pakati peChongqing neYichang. Rwendo runonakidza, runopa vafambi nemukana wekuona kunaka kwemakorori.
Iwo Matatu Gorges ndiQutang Gorge, Wu Gorge, uye Xiling Gorge. Qutang (/ chyoo-tung / 'Qu (zita remhuri) dziva') Gorge inotanga mudunhu reguta reFengjie, nezve 500 km zasi kwerwizi kubva Chongqing guta, muChonqing Township. Qutang ingangoita makiromita makumi mana pakureba uye inoperera paWushan (/ Woo-shan / 'Witch Mountain') County Town.
Wu Gorge ("Muroyi") anotanga Daning ajoina Rwizi rweYangtze muWushan. Rwendo rwuchidzika neRwizi rweDaning unotora vafambi kuburikidza neChidiki Matatu maGorges, yakadzvanywa vhezheni yeTatu Gorges, iyo ine set yakamira yakatetepa pamipata, inonzi Mini yeMatatu Gorges kune rimwe divi. Wu Gorge iri zvakare ingangoita makiromita makumi mana pakureba uye inobatana neXiling Gorge mudhorobha reBadong (/ bar-dong / chaizvo "East Sihuan uye Chongqing", uye chaizvo chete pamuganhu neHubei Province).
Xiling Gorge (/ sshee-ling / 'west chain') chikamu cheBadong, pamusangano weShennong Stream neYangtze. Mvura inoonekera sekristaro, nzira dzakaturikwa uye akaisa mabhokisi eShennong Creek anotora vashanyi kubva kune mini-cruises kuti vaongorore kukwezva uku kubva kudivi. Sanyou Cave (/ san-yo / 'vafambi vatatu'), imomo vadetembi vekare vatatu vane mukurumbira vanonzi vakagaraIri bako rakanaka, "bako rakanakisa munzvimbo nhatu dzeGorges". Sanyou Cave anenge makiromita gumi kubva kuYichang muXiling Gorge. Xiling Gorge ingangoita zana remakiromita uye inopera muYichang guta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Iyo matatu Gorges Dam, rakakura kwazvo pasirese
Edward Hurtado akadaro
Masikati akanaka Shamwari. Vari sei? Zita rangu ndinonzi Eduardo Hurtado uye ndiri Injiniya weindasitiri. Kwemwedzi ndanga ndichishanda paDevelopment yemamwe maHydroelectric Generation Projects. Avo vanofarira kuziva nezvazvo. Ndinyorere uye ini ndichakuudza zita remusoro wenyaya.
Pindura Eduardo Hurtado
Kufananidza kwemhando dzakasiyana dzemagetsi emagetsi
Galicia inokurudzira kuiswa kweanopfuura mazana mana ezviuru emabhoomass